Maurice Tsihiavonana : Manao ranolava ireo mankahery ny fianakaviana -
AccueilSongandinaMaurice Tsihiavonana : Manao ranolava ireo mankahery ny fianakaviana
Ankoatra ny maha-mpanao gazety azy, olon’ny fihavanana sy olon’ny fiaraha-monina ihany koa i Maurice Tsihiavonana. Nodimandry ny alatsinainy teo ity mpamakafaka politika manana ny laznay ity. Hatramin’ny nahatongavan’ny nofo mangatsikany etsy amin’ny trano fonenany etsy Ambatobe Andrefana dia manao ranolava ireo fianakaviana, tapaka sy namana ary mpiara-miasa mamangy sy mitondra ny teny fampihononana ary mankahery ireo fianakaviana. Anisan’ireo tonga nidododo teny an-toerana omaly ireo mpiara-miasa aminy ao anatin’ny Vondrona RLM Communication izay misy ny on Air Radio/TV izay niasany farany. Nitarika ireo mpiara-miasa marobe ny filoha Tale Jeneralin’ny RLM Communication, Mbola Joseph Rajaonah, nitondra ny fampiononana. Nivoitra hatrany tao anatin’ny famangiana ny anjara toeran’i Maurice Tsihiavonana tamin’ny asa fanaovan-gazety, indrindra ny tao anatin’ny vondrona amin’ny maha-mpamakafaka azy. Isan’ireo nandrenesan’ny maro ny feony ny fandaharana isaky ny atoandro « On Air Magazine ».
Ho fahatsiarovana an’i Maurice Tsihiavonana , dia nanokana fandaharana manokana omaly hariva ny On Air TV, ka nitondran’ireo mpiara namana mpanao gazety sy mpanao famakafakana taminy ary ireo niara-niasa taminy farany. « Na tsy nitovy aza ny fomba fijery tany am-boalohany, rehefa nisy ny fianakalozana tamin’ireo mpanao gazety namana dia nipetraka ny fiaraha-miasa hametraka zavatra tsara », araka ny fanazavan’ny Filoha Tale Jeneralin’ny RLM Communication nandritra io fandaharana io. « Olona tsy mivadika ary matihanina teo amin’ny asa ataony sy ny famakafakana nentiny izy, ary olona tsotra sy tompon’andraikitra amin’ny asa ataony. Diso ny filazana fa tia mivadibadika i Maurice Tsihiavonana », hoy hatrany ny fanazavan’ny Filoha Tale Jeneraly. « Na izany aza, dia tsy menatra ny miteny rehefa misy tsy mety », hoy hatrany izy. Nandray anjara tamin’io fandaharana manokana io ireo niara-niasa taminy toa an-dry Rabelaolao, Michel Ralibera, ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety Gérard Rakotonirina, Zafilahy… Teo ihany koa ireo mpiara-miasa aminy taty aoriana toa an-dry Mahefa Rakotomalala (La Dépêche).